Mmechi ntutu ntutu Braziil Straight Virgin Soie ntutu Atlanta Mmechi ntutu ntutu Braziil Straight Virgin Soie ntutu Atlanta
Mmechi ntutu ntutu Braziil Straight Virgin Soie ntutu Atlanta - Mgbe ebighi ebi na ntutu ntutu
Mmechi ntutu ntutu ntutu nke Brand Brand
Ntutu VIRGIN Organic. A na-enweta ntutu ntutu anyị nke Brazil site na ntutu kachasị mma mmadụ. Ọ na-ejide curls na agba nke ọma, na-adịgide ihe dị ka afọ 2 na nlekọta kwesịrị ekwesị.
Anyị Mmechi ntutu ntutu ntutu nke Brand Brand na-anapụta India ozugbo. Ọ bụ otu n'ime ụdị ntutu kachasị dị mma n'ọma ahịa ma bụrụ ntutu dị mma. A na-egbute ngwa ahịa anyị niile na ebumpụta ụwa ha na nke ọ bụla na - esite n'aka ndị na - enye 1-2 iji hụ na agbanwe agbanwe.
Ihe mmechi dị ogologo n'ogologo ruo sentimita 20.